सुधारले पुग्दैन, संरचनामै हान्नुपर्छ- विचार - कान्तिपुर समाचार
यो कुरा कठोर लाग्न सक्छ, केही अव्यावहारिक र ‘युटोपिया’ जस्तो पनि । कसैलाई यो त विसर्जन भयो, सामना होइन पलायन भयो भन्ने पनि लाग्ला । जब वर्ण नै समस्याको मूल स्रोत हो भने वर्णान्तर किन नगर्ने ? दलितमोचन गरेर एउटा नयाँ सुशिक्षित, आधुनिक पेसा–व्यवसायले सज्जित सहरिया वर्गको रचना किन नगर्ने ? पहाडको हकमा यो सजिलो छ । त्यहाँ तीन वर्ण मात्र छन्— ब्राह्मण, क्षत्री र दलित । ब्राह्मण, क्षत्री र दलितको थरगोत्र मिल्छ पनि । भाषा, धर्म र संस्कृतिका हिसाबले माथिल्लो वर्णान्तर सम्भव छ । यो हुँदै नभएको कुरा पनि होइन । हिजो शासकको आदेशले भएको छ, केही जातका सन्दर्भमा । आज अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मेका सन्तानको थरगोत्र र वर्णमा रूपान्तरण भएको छ । तसर्थ यो गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्छ । मधेसी दलितका सन्दर्भमा अलि जटिल होला, तर त्यहाँ पनि विकल्प यही हो । यसमा दलित समुदायको पनि एउटा साझा मत बन्न सक्यो, सम्बन्धित परिवारको सहमति र सहयोगमा सरकारले ठोस कार्यक्रम बनाएर अलि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने एक–दुई दशकमै हामी दलितमुक्त समतामूलक सामाजिक रूपान्तरण देख्न सक्छौं । योबाहेक मैले अर्को उपाय देखेको छैन । कानुनी सुधार वा केही आर्थिक राहतका पुरिया, केही छात्रवृत्तिले तात्त्विक अन्तर ल्याउन सक्तैन, अर्को हजार वर्षमा पनि । प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ ०९:१२
भारतीय अर्थतन्त्रमा आशा भर्दै टेलिकम क्षेत्र
कोभिड–१९ महामारीकै बेला भित्र्याए १३ खर्बभन्दा बढी विदेशी लगानी
काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण संसारभरका उद्यम र व्यवसाय प्रभावित छन् । अनलाइन डेलिभरी र अनलाइनसम्बन्धी सेवा दिने प्रविधि कम्पनीबाहेक सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले आगामी दिनमा वैदेशिक लगानी र रेमिट्यान्समा समेत घट्ने सबै अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ ।
यसको विपरीत भारतीय टेलिकम कम्पनीहरूले भने महामारीकै बीच धमाधम लगानी भित्र्याइरहेका छन्, जसले कोभिड–१९ का कारण खुम्चिने अनुमान गरिएको विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रमा केही भए पनि त्राण भरिने विश्लेषण छ । सबैजसो ठूला अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले भारतीय टेलिकम बजारमा चासो देखाइरहेको भए पनि कोभिड–१९ का कारण उनीहरूलाई भारतीय बजारमा प्रवेशको अवसर मिलेको छ ।
छोटो समयमै भारतको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम कम्पनी बनेको रिलायन्स जियोले मात्रै महामारीकै बीच पछिल्लो सात हप्तामा करिब साढे ११ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याइसकेको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा आफ्नो सेयर बिक्रीमार्फत थप विदेशी लगानी भित्र्याउने विश्वास छ ।
भारतीय टेलिकम कम्पनी जियोमा फेसबुकले ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै ९ दशमलव ९ प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो । फेसबुकले सन् २०१४ मा २२ अर्ब डलरमा ह्वाट्सएपको सेयर किनेपछि सबैभन्दा ठूलो लगानी जियोमा गरेको हो । भारतीय ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउन फेसबुकले पटकपटक प्रयास गर्दै आएको थियो । यसअघि फेसबुकले आफ्नोसहित सीमित राखेर दुई वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट चल्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सस्तोमा फोन बिक्री गर्ने तयारी गर्दै स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष निवेदन दिएको थियो । तर फेसबुकको प्रस्ताव प्रतिस्पर्धा र तटस्थ इन्टरनेटको विपरीत भएको भन्दै भारतीय दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो । प्रविधि कम्पनीहरूले सवा एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतको ग्रामीण क्षेत्रलाई भविष्यको ठूलो बजार देखिरहेका छन् ।
महामारीकै बीच अमेरिकी इक्विटी कम्पनी सिल्भर लेकले जियोको १ प्रतिशत सेयर ७५ करोड डलरमा खरिद गरेको थियो । अमेरिकास्थित अर्को इक्विटी फर्म भिस्टा इक्विटीले पनि जियोको २ दशमलव ३२ प्रतिशत सेयर डेढ अर्ब अमेरिकी डलरमा किनेको थियो ।
महामारीकै बीच पनि जियोले बैंकलाई तिर्नुपर्ने आफ्नो खुद ऋण २१ अर्ब डलर सन् २०२१ को सुरुवातमै चुक्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले कोभिडका कारण आइपरेको आर्थिक शिथिलता उकास्न पनि ठूलो सहयोग मिल्नेछ । यसै साता मात्रै जियोले अबुधाबीस्थित मुबादालालाई आफ्नो १ अर्ब २० अर्ब बराबरको सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । यो सम्झौतासँगै सन् २०१६ को मध्यतिर सुरु भएको भारतीय कान्छो टेलिकम कम्पनीको बजार मूल्य ६५ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ । अर्को कमेरिकी कम्पनी जेनेटर एटलान्टिकले पनि जियोमा ८७ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
जियो मात्रै होइन, भारतका अन्य टेलिकम कम्पनीले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने तयारी गरिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार अमेरिकी कम्पनी अमेजनले भारतको अर्को ठूलो टेलिकम कम्पनी भार्ती एयरटेलमा २ अर्ब डलर लगानी गर्ने तयारीस्वरूप छलफल अघि बढाएको छ । भार्ती एयरटेल भारतको तेस्रो ठूलो कम्पनी हो ।
भारतको दोस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनी भोडाफोन आइडियामा गुगलले लगानीका लागि छलफल सुरु गरेको पनि समाचार पनि आएका छन् । जियोले गरेको लगानी र आक्रामक बजारीकरणले भारतका अन्य टेलिकम कम्पनीको बजार हिस्सा गुम्दै गएको छ । महामारीका बेला मात्रै नभई अरू बेला पनि भारत भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सञ्चार सेवामा बढी हुने गरेको तथ्यांक देखिन्छ । सन् २०१७ मा भारत भित्रिएको वैदेशिक लगानीको तथ्यांक हेर्ने हो भने ८ अर्ब ८० करोड डलरभन्दा बढी लगानी सञ्चार क्षेत्रमा छ । सन् २०१७–१८ मा भारतमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी सञ्चार क्षेत्रमा भित्रिएको थियो । उक्त समयमा सञ्चार सेवामा भित्रिएको लगानी त्यसअघिको वर्षभन्दा ५० प्रतिशत बढी हो ।
जियोले बजारमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन नाफा लगभग शून्य रहने गरी सस्तोमा भ्वाइस र डेटा उपलब्ध गराउन थालेपछि भारतका अन्य टेलिकम कम्पनीलाई पनि मूल्य घटाउने दबाब बढेको थियो । यो दबाबका कारण धेरै टेलिकम कम्पनीको वित्तीय अवस्था नकारात्मक बन्दै गयो भने केही कम्पनी मर्ज हुन बाध्य भए ।
जियोको ठूलो लगानीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भारतीय सबै टेलिकम कम्पनीले ठूलो लगानी गर्ने साझेदार खोजिरहेका छन् । भारतका करिब ५० प्रतिशत जनतामा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच पुगेको तथ्यांक छ । जसका कारण आधा नागरिक अझै पनि इन्टरनेटको पहुँच बाहिर छन् । इन्टरनेटको पहुँच नपाएका करिब ७० करोड भारतीय नागरिकलाई प्रविधि कम्पनीले भविष्यको बजार देखिरहेका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ ०९:०९